Gionee M6S Plus, ၆,၀၂၀ mAh ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည် Androidsis
Gionee M6S Plus, ၆,၀၂၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်
ဟိုဆေး Alfocea | | ဘက်ထရီ, NOTICIAS
နာရီအနည်းငယ်အကြာမှာငါကအပြီးသတ်ပစ်လွှတ်မှုအကြောင်းပြောနေတာပါ LG X ပါဝါ 2၎င်းသည်ဘက်ထရီ၏ကြီးမားသောစွမ်းဆောင်နိုင်မှုကြောင့် ၄၅၀၀ mAh ကြောင့်ဖျော်ဖြေရေးနှင့်စကားပြောဆိုမှုအတွက်နာရီနှင့်နာရီကိုပေးနိုင်သောအလယ်အလတ်တန်းစား terminal တစ်ခုနောက်ကျ။ ရောက်သော်လည်း၎င်း၏အမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားစဉ်းစားနေစေသည်။ သို့သျောလညျး, ကိုရီးယား၏နောက်ထပ် terminal ကိုပစ္စုပ္ပန်အများဆုံးဘက်ထရီစွမ်းရည်နှင့်အတူတ ဦး တည်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။
သိပ်မသိရသေးသော Gionee ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်စွမ်းဆောင်ရည်ကြီးမားသည့်ဘက်ထရီပါ ၀ င်သည့် M6S Plus ဟုခေါ်သည့်စမတ်ဖုန်းအသစ်ကိုကြေငြာလိုက်သည်။ 6.020 mAh ဖြစ်သော၎င်းသည် plug မှနှစ်ရက်ကြာနေရန်လုံလောက်သောဖြစ်သင့်သည်e.
LG X Power2ကဲ့သို့ Gionee M6S Plus အသစ်သည်အရွယ်အစားကြီးမားသောကြောင့် phablet အမျိုးအစားသို့ကျရောက်ခဲ့သည် Full HD resolution ဖြင့် ၆ လက်မ AMOLED မျက်နှာပြင်အတွင်း၌နေစဉ်တစ် Snapdragon 653 ပရိုဆက်ဆာ ရောက်ရှိလာသည်သော Qualcomm စပျစ်သီးကိုပိုပြီးဘာမျှမထက်လျော့နည်းဘာမျှမဖြင့်လိုက်ပါသွား6GB RAM မှတ်ဉာဏ်.
သိုလှောင်မှုနှင့်စပ်လျဉ်း။ M6S Plus ကိုမူကွဲ ၂ မျိုးဖြင့်ရောင်းချလိမ့်မည်။ 64 သို့မဟုတ် 256 GBအလယ်အလတ် options များမပါဘဲ။ မော်ဒယ်နှစ်ခုစလုံးအတွက် slot တစ်ခုရှိသဖြင့်သင်နေရာပိုလိုအပ်နေပါကစိတ်ချစွာအနားယူနိုင်ပါသည် microSD ကဒ် သင်၏သိုလှောင်မှုကို 128GB အထိတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ပြီးတော့ဘယ်လိုမှမဟုတ်နိုင်ဘူး၊ လက်ဗွေဖတ်စက် ကင်မရာရဲ့အောက်ဘက်၊ terminal ရဲ့နောက်ဖက်မှာရှိတယ်
ကင်မရာတွေပြောရမယ်ဆိုရင် ... Gionee M6S Plus မှာa12 MP အဓိကကင်မရာ တစ် ဦး ကို aperture,f/ 1.9 အတူ ရှေ့ကင်မရာသည် 8 MP အာရုံခံကိရိယာကိုပေါင်းစပ်ထားသည်.
ကံမကောင်းစွာဖြင့် Android Nougat သည်ဤ terminal အသစ်နှင့်အတူစံချိန်စံညွှန်းနှင့်ကိုက်ညီမည့်စနစ်မဟုတ်ပါ အန်းဒရွိုက် 6.0 Marshmallow အသုံးပြုသူ၏ interface၊ Amigo 3.5 နှင့်ညှိထားသည်။
ကျနော်တို့ကနေလေ့လာခဲ့ကြသည့်အတိုင်း 360 gadgets, Gionee M6S Plus ကိုမေလ ၂ ရက်မှ စတင်၍ တရုတ်နိုင်ငံယွမ် ၃,၄၉၉ ဖြင့်ရောင်းချမည်ဖြစ်သည်။ 510 $ 64GB model အတွက်၊ ယွမ် ၄၂၉၉ (625 $) 256GB ဗားရှင်းသည်။ ၎င်း၏နိုင်ငံတကာတိုးချဲ့မှုအကြောင်း, ယခုအချိန်အထိဘာမျှမသိရ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » လဲ tutorial » ဘက်ထရီ » Gionee M6S Plus, ၆,၀၂၀ mAh ဘက်ထရီပါရှိသည်
အကောင်းဆုံး Android အပလီကေးရှင်းများ
Samsung Galaxy J3 (2017) ၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစစ်ထုတ်ထားသည်